बर्षौदेखि जंगलको ओडार र छाप्रोमा सत्य पुनमगर | Kendrabindu Nepal Online News
बर्षौदेखि जंगलको ओडार र छाप्रोमा सत्य पुनमगर
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:४१
माओवादी युद्धकालदेखि नै विस्थापित भई मनाङ छिरेका रुकुमका सत्य पुनमगर जंगलमा बसेको धेरै बर्ष भइसक्यो ।
पानी परोस् या हिउँ नै किन नपरोस् उनी यही छाप्रोमा रात काट्छन् । दिनभरि रूख ढाल्ने, ताछ्ने, साइजअनुसार चिरा पार्ने उनको काम रहेको छ । यसरी काम गर्दा कति कमाउनु हुन्छ भनी सोध्दा उनले भने, “दिनको रु ६०० पर्छ, खान बस्न यसैमा पर्छ ।”
तपार्इं घर जानु भएको छैन ? भन्दा उनले भने, “१० वर्ष त गइन, अहिले दशैँमा गएको थिएँ । आफन्तले नै चिनेनन्, अनि फर्किएँ । मेरो घर भनेको यही वन हो र मेरा आफन्त नै यिनै रूख हुन् । यिनैले खाना दिएका छन्, लाउन दिएका छन् । मलाई यसैमा खुशी छ । यहाँका ढुङ्गा, माटो, रूखबिरुवा सबैले चिनेको छ ।”
यसरी जंगलमा कहिलेसम्म बस्ने त ? भन्दा उनले भने, “बाँचुन्जेल र हातगोडा चलुन्जेल बस्छु । मरेपछि जेहोला होला ।” अहिले उनीसँग रोल्पाका काले बुढामगर साथी छन् । दुवैजना यही छप्रोमा बसेर काठको काम गर्दै आएका छन् । यसरी माओवादी जनयुद्धसँगै गाउँ छाडेका कयौँ सत्य पुनमगरहरु कुनै न कुनै पीडा बोकेर हाकु लेकको जंगलमा बास बस्न बाध्य छन् ।
Prevसवारीसाधन लिएर निस्कँदै हुनुहुन्छ ? यी ठाउँहरुमा हुनेछ जाम
मोदीको बिरोध हुन् सक्ने भन्दै ३ जना पक्राउNext